Izindaba - Iyini i-Valve Check?
Hlola ama-valve ngokuvamile zifakwe kupayipi ukuvikela ukugeleza kwangemuva. I-valve yesheke ngokuyisisekelo i-valve yendlela eyodwa, ukugeleza kungahamba ngokukhululeka ohlangothini olulodwa, kepha uma ukugeleza kujikeleza, i-valve izovalwa ukuvikela ipayipi, amanye ama-valve, amaphampu, njll. Uma uketshezi luphenduka kodwa isheke i-valve ayifakiwe, isando samanzi kungenzeka. Isando samanzi sivame ukwenzeka ngamandla amakhulu futhi singalimaza kalula amapayipi noma izingxenye.
Izinto okufanele uzinake lapho ukhetha i-valve yesheke
Lapho ukhetha i-valve yesheke, kubalulekile ukwenza ukuhlaziywa kwezindleko-kohlelo oluthile. Ukugxila okujwayelekile ukunciphisa izindleko ngenkathi uthola ukulahleka kwengcindezi okuphansi kakhulu, kepha kuma-valve wokuhlola, ukuphepha okuphezulu kufana nokulahleka kwengcindezi ephezulu. Ngakho-ke, ukuze kuqinisekiswe uhlelo lokuvikela i-valve valve, uhlelo ngalunye ludinga ukuhlolwa lodwa, nezinto ezifana nobungozi besando samanzi, ukulahleka kwengcindezi okwamukelekayo, nemiphumela yezezimali yokufaka i-valve yokuhlola kufanele ibhekwe ngesando samanzi.
Ukuze ukwazi ukukhetha i-valve efanele yokuhlola uhlelo lwakho lokusebenza, kunezinqubo eziningi zokukhetha okufanele uzicabangele. Okokuqala, alukho uhlobo olulodwa lwe-valve yokuhlola okuyisinqumo esingcono kakhulu kuzo zonke izinhlelo zokusebenza, futhi izindlela zokukhetha azibalulekile ngokulinganayo kuzo zonke izimo.
Ezinye izindlela zokukhetha okufanele uzicabangele lapho ukhetha i-valve yesheke
Ezinye izinto ongadinga ukuthi uzicabangele ukuhambisana koketshezi, izici zokugeleza, ukulahleka kwekhanda, izici ezingezona umthelela, nezindleko eziphelele zobunikazi. Ukuze uthole ukusebenza okuhle kakhulu, kubalulekile ukuthi ukhethe i-valve ngokuya ngezindlela zezindlela ezahlukahlukene zokufaka.
Onke ama-valve esheke asetshenziselwa ukwelapha amanzi namanzi angcolile, kepha ukwelashwa kwamanzi angcolile / indle kungadala izinkinga. Lapho ukhetha ama-valve alolu ketshezi, kufanele ucabange ukuthi ukutholakala kwezinto eziqinile kungakuthinta kanjani ukusebenza kwe-valve.
Uma i-valve yokuhlola ivala ngokushesha okukhulu, kungenzeka ukuvimbela ukushaywa. Kodwa-ke, ukuvala shaqa okusheshayo akuvimbeli ukuqhuma okwenzeka lapho ipompo iqala futhi icisha. Uma i-valve ivula (futhi ivala) ngokushesha, izinga lokugeleza lizoshintsha ngokungazelelwe futhi ukuqhuma kungenzeka.
Ukulahleka kwekhanda kwe-Valve kungumsebenzi we-velocity fluid. Ukulahleka kwekhanda kwe-Valve kuthinteka yizimo zokugeleza kohlelo nobuso obungaphakathi kwe-valve. I-geometry yomzimba we-valve nokwakhiwa kokuvala kunquma indawo yokugeleza nge-valve ngakho-ke kuthinta nokulahleka kwekhanda.
Ukwehliswa kwekhanda okuzocatshangelwa yinhlanganisela yekhanda elingaguquguquki (elibangelwa umehluko wokuphakama) nekhanda lokungqubuzana (okubangelwa ipayipi nengaphakathi le-valve). Ngalesi sizathu, kunamafomula amaningi we-valve headloss nenani elilinganisiwe. Okuvame kakhulu kungaba yi-coefficient yokugeleza kwenani lamanzi adlula ku-valve ngokwehla kwengcindezi ethile esikhathini esithile. Kepha uma kuqhathaniswa, kubhekwa ukuthi i-resistivity Kv iyona engcono kakhulu.
Izindleko eziphelele zobunikazi
Izindleko ze-valve yakho yokuhlola zingafaka ngaphezu kwentengo yokuthenga. Kokunye ukufaka, izindleko ezibaluleke kakhulu mhlawumbe ukuthenga nokufaka, kepha kwezinye izimo, izindleko zokulungisa noma zamandla zingabaluleka noma zibaluleke kakhulu. Lapho usebenzisa izindleko njengemibandela yokukhetha i-valve yesheke, izindleko eziphelele ngempilo ye-valve kufanele zibhekwe. Ngokuvamile, lapho isakhiwo se-valve silula, kwehla izidingo zesondlo.
Izici ezingezona ze-slam
Hlola i-valve I-slam idala ukuthi ingcindezi yohlelo iguquguquke. Isinyathelo sokuqala kule nqubo ukuguqula ukugeleza lapho ipompo iyeka. Lokhu kungadala ukuhlehlela emuva nge-valve ngaphambi kokuba i-valve ifike endaweni evaliwe ngokuphelele. Ngemuva kwalokho ukugeleza okuphindayo kuvaliwe, futhi ushintsho kwezinga lokugeleza liguqula amandla e-kinetic oketshezi acindezele.
I-slam izwakala njengomsindo owenziwe lapho i-disc noma ibhola le-valve lokuhlola lishaya esihlalweni se-valve, futhi lidala umsindo omkhulu. Kodwa-ke, lo msindo awudalwa ukuvalwa komzimba, kodwa ngamagagasi omsindo akhiqizwa izingcindezi zengcindezi ezelula udonga lweshubhu. Ukugwema ukushaya ngokuphelele, i-valve yokuhlola kufanele ivalwe ngaphambi kokuthi kwenzeke noma iyiphi i-velocity reverse. Ngeshwa, lokhu akwenzekanga. I-geometry ye-valve inquma ukuthi kungakanani ukuphuma emuva okuzokwenzeka, ngakho-ke lapho i-valve ivalwa ngokushesha, ukushaya kancane.